ဟာဝိုင်ယီ WIC | JPMA, Inc
သင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုဟာဝိုင်ယီ WIC အစီအစဉ်သို့ကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ဒေသခံ WIC ဆေးခန်းကိုမေးမြန်းပါ။ WICShopper အက်ပလီကေးရှင်းမှာအခက်အခဲရှိပါသလား။ JPMA ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ WICShopper@jpma.com
သငျသညျ WIC အသစ်ဖြစ်ပါသလား အောက်ကဟာဝိုင်ယီ WIC အရှေ့တိုင်းဆန်ကဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ
Q: ငါသည်ငါ့ WIC အစားအစာများအပေါငျးတို့သဝယ်ဖို့ရှိပါသလား?
A: အဘယ်သူမျှမသင်ဖို့ပေး WIC အစားအစာများအပေါငျးတို့သဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါ။
A: အနည်းငယ်အစားထိုးအချို့သောအစားအစာများကိုအဘို့အခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများဆွေးနွေးရန်သင့်ရဲ့ WIC ဆေးခန်းကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်သင့်စစ်ဆေးမှုများသို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်ကိုပြောင်းလဲရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမအစားထိုးစတိုးဆိုင်မှာလုပ်နိုင်ပါသည်။ သင် WIC စစ်ဆေးမှုများသို့မဟုတ် eWIC ကဒ်ကိုသုံးပြီးအစာဝယ်ယူဖို့ရွေးချယ်ပါကစစ်ဆေးမှုများသို့မဟုတ်အကျိုးကျေးဇူးများစာရင်းအပေါ်ပုံနှိပ်ဘာရရမည်ဖြစ်သည်။
A: WIC အစားအစာများကိုသာအစီအစဉ်အပေါ်ပါဝင်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရည်ရွယ်နေကြသည်။ WIC စစ်ဆေးမှုများသို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်ကိုလက်ခံရရှိသင့်အိမ်ရှိသူတို့တစ်အချို့ WIC-ပေးအပ်အစားအစာမစားဘူးဆိုရင်အဲဒီမှာတစ်ခုခွင့်ပြုအစားထိုးသို့မဟုတ်သူတို့ကိုသင့်ရဲ့စစ်ဆေးမှုများသို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်ကနေဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကြပါလျှင်, သင့်ဆေးခန်းန်ထမ်းကိုမေးပါ။
A: နို့တိုက်ခြင်းသည်သင်နှင့်သင့်ကလေးအတွက်သင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိခင်များအနေဖြင့်မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်ခါတလဲလဲမေးစရာမေးခွန်းများရှိတတ်သည်သို့မဟုတ်အပိုအထောက်အပံ့လိုအပ်သည်။ ရပါတယ်! WIC ကကူညီဖို့ဒီမှာပါ။ သင်၏ဒေသဆိုင်ရာ WIC ရုံး၌သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်နှင့်သင်၏နို့တိုက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိရန်ကူညီနိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်နို့တိုက်သတ္တဝါအထူးကျွမ်းကျင်သူများရှိသည်။ မေးရုံသာ!
ဒီနေရာမှာအပိုဆောင်းတချို့ပါ information နှင့်အရင်းအမြစ်များ ကူညီဖို့ရန်သင့်အားပြန်အလုပ်သို့မဟုတ်ကျောင်းသို့သွားပြီးနောက်နို့တိုက်ကိုစောင့်ရှောက်။
Q: ငါ WIC အပေါ်အော်ဂဲနစ်အစားအစာရနိုင်မလား?
A: ဟုတ်ပါသည်၊ အော်ဂဲနစ်ရွေးချယ်စရာများရှိသည့် WIC မှထောက်ခံသည့်အစားအစာများစွာရှိသည်။ အော်ဂဲနစ်ရွေးချယ်မှုများသည်ကလေးအစားအစာများနှင့်သစ်သီးများအတွက်ဖြစ်သည်။ လတ်ဆတ်သောအေးစက်စက်နှင့်စည်သွတ်သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ တိကျသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အမျိုးအစားများအတွက် WIC ၏အတည်ပြုထားသောအစားအစာစာရင်းကိုဖတ်ပါ။
Q: ငါသည်ငါ့ကလေးရဲ့ WIC အကျိုးကျေးဇူးများကိုနှင့်အတူမွေးကင်းစကလေးဆန်သီးနှံမဝယ်နိုင်ပါသလား?
A: မွေးကင်းစဆန်သီးနှံထုတ်ကုန်များတွင်တွေ့ရသောအာဆင်းနစ်ပါဝင်မှုကြောင့်နို့စို့ကလေးသီးနှံသည် WIC အစားအစာမဟုတ်ပါ။ သင်၏ WIC အကျိုးခံစားခွင့်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်မွေးကင်းစကလေးများရှိပါကကလေးငယ် oatmeal၊ multigrain, ဂျုံလုံးနှင့်မုယောစပါးရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
သင်၏ WIC ချက်လက်မှတ်များသို့မဟုတ် eWIC ကဒ်ကိုသင်နှင့်အတူစတိုးဆိုင်သို့ယူဆောင်လာရန်မမေ့ပါနှင့်!
သင့်ရဲ့ဟာဝိုင်ယီ WIC သင်မဝယ်နိုင် WIC အစားအစာများကိုကြည့်ရှုရန် WICShopper (သို့မဟုတ်သင့်ပုံနှိပ်ဗားရှင်း) တွင်အစားအစာများစာရင်း Approved ကိုသုံးပါ။
ခွင့် - ဤပစ္စည်းများကိုဟာဝိုင်ယီ WIC အဘို့အခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်ဤအကြောင်းအရာအားဝယ်ယူရန်အတွက် WIC အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိသည်!
A: "ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်!"သင်ဝယ်ယူရန်ကြိုးစားနေတစ်အစားအစာကို item အဆိုပါမှတ်ပုံတင်မှာငြင်းပယ်သောအခါသင်သည် WIC ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်အသုံးပြုတဲ့အခါ, "ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်!" အဆိုပါ WICShopper app ထဲမှာကျနော်တို့ပြည်နယ် WIC ရုံးမှာအသိပေးစာအရပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနှင့်သင်ဖို့ခွင့်ပြုအစားအစာများရရှိနိုင်စေရန်စတိုးဆိုင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ပစ္စည်းများအားလုံးပြန်လည်သုံးသပ်ရန်!
ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအစားအစာများကိုဝယ်ခြင်းငှါစစ်ဆေးမှုများကိုရယူပါ။ ငါ WIC ငါလိုအပ်သမျှအစားအသောက်မပေးပါဘူးငါသိ၏။
WIC ၀ န်ထမ်းများနှင့်စတိုးဆိုင် ၀ န်ထမ်းများမှမျှတစွာလေးစားမှု။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်အားမျှတစွာဆက်ဆံခြင်းမရှိပါက WIC ကြီးကြပ်ရေးမှူးနှင့်စကားပြောနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ရထိုက်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသဘောမတူပါကကျွန်ုပ်သည် WIC ညွှန်ကြားရေးမှူးသို့မဟုတ်ပြည်နယ် WIC ရုံးသို့ညီလာခံတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြားနာမှုတစ်ခုအတွက်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
privacy ။ WIC ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒကဤပုံစံ၏နောက်ကျောတွင်တွေ့သည်။
Medicaid ကို, Food Stamps (SNAP), ဒါမှမဟုတ်မိသားစုအလုပ်အကိုင်အစီအစဉ် (TANF) ၌ငါ့ပါဝင်မှု။ ငါ WIC အဘို့အကြှနျုပျကိုရထိုက်ခွင့်ကိုဖန်ဆင်းသော program တစ်ခုပါဝင် Stop လျှင် WIC သိစေပါလိမ့်မယ်။
ငါ့လိပ်စာ။ ကျွန်ုပ်၏လိပ်စာသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အပြောင်းအလဲများကိုသတင်းပို့ပါလိမ့်မည်။ ပြည်နယ်မှထွက်သွားလျှင်ကျွန်ုပ်သည်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အတည်ပြုခြင်း (VOC) တောင်းခံနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပြည်နယ်အသစ်တွင် WIC ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။
သာသည်အဘယ်သူ၏နာမသစစ်ဆေးမှုများပေါ်မှာလူတစ်ဦးအဘို့အကြှနျုပျ၏ WIC အစားအစာများကိုသုံးပါ။
ကျွန်ုပ်၏ WIC အစားအစာများသို့မဟုတ်ချက်လက်မှတ်များကိုရောင်းရန်၊ ပေးရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်ဘယ်တော့မျှမပေးပါနှင့်။ ၎င်းတွင်၎င်းတို့အားအွန်လိုင်းတွင်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်သို့ပြန်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်ရောင်းချရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသည့်မည်သည့်အစားအစာကိုမဆိုကျွန်ုပ်ရရှိသော WIC အစားအစာနှင့် WIC အစားအစာဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်လိမ့်မည်။ အစားအစာအတွက်အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လတစ်ဦးတည်းသာ WIC ဆေးခန်းကနေစစ်ဆေးမှုများကိုရယူပါ။ ငါကို dual ပါဝင်မှုတရားမဝင်ကြောင်းနားလည်ပါသည်။
ငါ၏အချိန်း Keep သို့မဟုတ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးရန်ဆေးခန်းကိုခေါ်ပါ။ ကျွန်မတတန်းအတွက်နှစ်လအဘို့အကြှနျုပျ၏စစ်ဆေးမှုများကောက်ကြဘူးလျှင်ငါအစီအစဉ်ကိုချွတ်ယူနိုင်ပါတယ်နားလည်ပါတယ်။
ငါဆေးခန်းကိုသွားသည့်အခါငါ့ကိုမနဲ့ငါ့ WIC ID ကို packet ကိုယူခဲ့သို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်မှာ WIC စစ်ဆေးမှုများဖြုန်းနေကြတယ်။
, ဆုံးရှုံးခဲ့ရခိုးယူသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခံရခံရမှသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, ငွေသားများကဲ့သို့ငါ၏အ WIC စစ်ဆေးမှုများကာကွယ်ပါ။
ကြှနျတေျာ့စစ်ဆေးမှုများပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ခိုးယူခံရလျှင် WIC န်ထမ်းကိုပြောပြပါ။ ဆုံးရှုံးသွားသောအဖြစ်ငါအစီရင်ခံစစ်ဆေးမှုများကိုမသုံးပါလိမ့်မယ်။
Buy, ငါ၏စစ်ဆေးမှုများနှင့်ဟာဝိုင်ယီ WIC စာရင်းဝင်သာအစားအစာများကိုအစားအစာစာအုပ်ငယ် Authorized ။
ယင်းဟာဝိုင်ယီ WIC အတွက်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါအစားအစာများစာအုပ်ငယ် Authorized ။
ကျွန်မဖတ်ပြီးပါပြီသို့မဟုတ် (ရှေ့အပေါ်ပုံနှိပ်), ငါ၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများပြောသည်ခဲ့တာ။ ငါသည်ဤတာဝန်များကိုနောက်သို့မလိုက်ကြပါလျှင်ကျွန်မအကြိုးခံစားခှငျ့အတှကျအပြန်ဆပ်ဖို့တောင်းစေခြင်းငှါသို့မဟုတ်ငါဖြစ်စေငါ၏သားသမီးတို့သည် WIC အစီအစဉ်ကိုချွတ်ယူစေခြင်းငှါငါသိ၏။
ဤသည်မှာလက်မှတ်ဖက်ဒရယ်ရန်ပုံငွေ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူလုပ်လျက်ရှိသည်။ ငါပေးပြီသတင်းအချက်အလက်များငါ့ပညာအတတ်ကိုအကောင်းဆုံးမှမှန်ကန်သောကြောင်းသက်သေခံပြီးဖြစ်သည်။ Program ကိုဝန်ထမ်းငါဆေးခန်းမှပေးပြီအချက်အလက်အားလုံးကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ငါ့ကိုအစားအစာ၏တန်ဖိုးများအတွက်ပြည်နယ်အေဂျင်စီဆပ်ဖို့ရှိခြင်းဖြစ်ပေါ်စေမည်: ငါမဆိုသစ္စာကိုဖျက် (မိစ္ဆာသို့မဟုတ်အထင်မြင်မှားစေသောကြေညာချက်အောင်သို့မဟုတ်အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်, ဖုံးကွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခွန်ရှောင်အချက်အလက်များဥပမာ) အစားအစာအကျိုးကျေးဇူးများကိုလက်ခံရရှိရန်ကဆိုပါတယ်သို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြုမိကြောင်းပြောဆိုချက်ကိုသင်သိရ လျြောငါ့အားပေးသော, နှင့်ပြည်နယ်အောက်မှာအရပ်ဖက်သို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှင့်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေငါ့ကိုလက်အောက်ခံလိမ့်မည်။
ငါ proxy ကိုသတ်မှတ်ရွေးချယ်ကြလျှင်, သူ / သူမကောက်နှင့်ငါ့အဘို့အကြှနျုပျ၏ WIC စစ်ဆေးမှုများရွေးနှုတ်တော်မူနိုင်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ proxy ကိုလည်းဖွင့်အတိုင်းလိုက်နာလည်ပတ်မှုကသူတို့ရဲ့အမြင့်နှင့်အလေးချိန် check လုပ်ထားရှိသည်ဖို့လိုအပ်လျှင်ဆေးခန်းမှ / ကလေးများငါ့ကလေးငါဆောင်ခဲ့မည်နှင့် / သို့မဟုတ်အနိမ့်သံအဘို့အပြအသွေးတော်ပေမည်။ ငါသည်ငါ့ proxy ၏လုပ်ရပ်များအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ကြောင်းကိုနားလည်ပါသည်။ သူတို့ကိုငါအားပေးပြီးမှမဆိုသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အကြောင်းကြားစာများအဘို့အကြှနျုပျ၏ proxy ကိုမမေးရပေမည်။ ငါက, ထောက်ခံချက်, ဒါမှမဟုတ်ငါသတ်မှတ်ထားကြသည့်အပိုဆောင်းထောက်ခံချက်, အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ချိန်းမှာလက်ရှိဖြစ်ရမည်နားလည်ပါသည်။
WIC privacy ကိုရန်သင့်ညာဘက်လေးစားပါသည်။ တစ်ဦး WIC ပါဝင်သူအဖြစ်, သင်သတိပေးချက်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ, စာလုံး, အခုတော့ရွာသားတွေ, ဒါမှမဟုတ်အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သင်တို့သည်ဤသတိပေးချက်များလက်ခံရရှိဖို့မတောင်းဆိုပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ WIC အစီအစဉ်တွင်သင့်ရဲ့ပါဝင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များ WIC အစီအစဉ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီပုဂ္ဂိုလ်များအစေခံသောအခြားကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရအစီအစဉ်များနှင့်အတူ Non-WIC ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် shared နိုင်ပါသည်။ ကနျြးမာရေး၏ဟာဝိုင်ယီဦးစီးဌာန၏အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးသင်သည်သူတို့၏န်ဆောင်မှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီလျှင်ကြည့်ဖို့သေချာသောအစီအစဉ်များမှလျှို့ဝှက် WIC အချက်အလက်များ၏ထုတ်ဖော်နှင့်အသုံးပြုမှုလုပ်ပိုင်ခွင့်မူပြီ အဝေးရောက်လုပ်ဆောင်သွားရန်; သငျသညျပြီးသားပါဝင်ကြသည်အစီအစဉ်များနှင့်အတူလိုအပ်ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့, အစီအစဉ်များအကြားအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများချောမွေ့ရန်, နှင့်အစီရင်ခံစာများနှင့်လေ့လာမှုများမှတဆင့်ဟာဝိုင်ယီမိသားစုများ၏အလုံးစုံကျန်းမာရေးအကဲဖြတ်ရန်ကူညီဖို့ရန်။ သင်တို့သည်ဤအစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုသတင်းအချက်အလက်များအတွက် WIC န်ထမ်းကိုမေးလိမ့်မည်။